computing - Synonyms of computing | Antonyms of computing | Definition of computing | Example of computing | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for computing
Top 30 analogous words or synonyms for computing
Java (programming language) Java တွင်Thread ကို ဘာသာရပ်၏ အခြေခံအသုံးပြုပုံအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားပြီး၊ Multi Thread ဖြင့်Parallel Computing ကို အခြားသော ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်များနှင့် စာလျှင် လွန်စွာလွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ Parallel Computingသည်၊ လုပ်ဆောင်ချက်များကို တစ်ကြိမ်တည်းတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပုံစံဖြစ်၏။ တဖန်Thread သည်၊Process ထက် ပေါ့ပါးသေးငယ်၏။
ဆန်း မိုက်ခရို စစ်စတမ် ဆန်း မိုက်ခရို စစ်စတမ် (Sun Microsystems) သည် ယခုအချိန်တွင် အော်ရကယ် ကော်ပိုရေးရှင်း၏ ကုမ္ပဏီခွဲ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဆန်း မိုက်ခရို စစ်စတမ် (Sun Microsystems) သည် ကွန်ပျူတာ, ကွန်ပျူတာ အစိတ်အပိုင်းများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ ရောင်းချခြင်းနှင့် IT (Information Technology)ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသော အမေရိကန်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ IT (Information Technology)ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပါတ်သက်၍ ဆန်း မိုက်ခရို စစ်စတမ် (Sun Microsystems) သည် Java Programming, Solaris operating system နှင့် Network fIle System (NFS) တို့ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဆန်း မိုက်ခရို စစ်စတမ် (Sun Microsystems) သည် Unix, RISC processors, thin client computing နှင့် virtualized computing အစရှိသော key computing technologies အများအပြား၏ ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများ အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဆန်း မိုက်ခရို စစ်စတမ် (Sun Microsystems) ကို ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ရက် နေ့တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ကွန်ပျူတာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း ဤအခန်းတွင် ဖော်ပြထားသောခေါင်းစဉ်များ၏ ဆွေးနွေးချက်အသေးစိတ်တစ်ခုကို ကြည့်ပါ။ လျှို့ဝှက်စွာစုစည်း (Spyware)၊ ကွန်ပျူ တာဗိုင်းရပ်(စ်) (Computer virus)၊ ထရိုဂျန် (Trojan)(ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေး) (Trojan (computer security))၊ ခလုတ်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (Keylogger)၊ နောက်ဖေးတံခါး (တွက်ချက်ခြင်း) (Backdoor (computing))
Java (programming language) အစိမ်းရောင်ပရိုဂျက်၏ အဖွဲ့ဝင်များသည်၊ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်အချို့တွင် C++ ၏အပြောင်းအရွှေ့မလွယ်ကူခြင်းကို ပြဿနာတစ်ခုအဖြစ် ကြည့်မြင်ခဲ့ကြ၏။ ထို အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ လုံခြုံရေးစနစ်၊နေရာခြားကွန်ပျူတာစနစ်(Distributed Computing)နှင့်၊စလက်များ(Multi Thread)ဖြစ်ကြ၏။ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်များသည် ပလတ်ဖောင်းအပေါ်တွင် မှီခိုခြင်းမရှိပဲ အသုံးချနိုင်ရန် လိုအပ်ပေသည်။ အထက်ပါအကြောင်းများကြောင့် သူတို့သည်၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုးတွင် လွယ်ကူစွာပြောင်းရွှေ့နိုင်သော ပလတ်ဖေါင်း၏ လိုအပ်ချက်ကို သိမြင်ခဲ့ကြ၏။
အလန် ကျူးရင်း စစ်ပြီးသည်နောက်မှာတော့ သူဟာ National Physical Laboratory တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး အလိုအလျောက်တွက်ချက်သည့်စက်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့သည်။ ဒါဟာ ပရိုဂရမ်သိမ်းဆည်းနိုင်သော ကွန်ပြုတာတို့၏ ပထမဆုံးဒီဇိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် သူသည် မန်ချက်စတာတက္ကသိုလ်ရှိ မက်ခ်နယူးမန်း၏ Computing Laboratory နှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး မန်ချက်စတာကွန်ပြူတာများ တီထွင်လေ့လာမှုကို တိုးတက်အောင် ကူညီခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူသည် Mathematical biology ကို စိတ်ပါဝင်စားလာခဲ့ပြီး Morphogenesis ၏ ဓာတုအခြေခံ စာတမ်းငယ်ကို ရေးသားခဲ့သည်။
ဝက်ဘ် World Wide Web သည် ၁၉၉၃ခုနှစ်တွင် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော Mosaic Web browser ဖြင့် အစပြုခဲ့သည်ဟုပညာရှင်များက ယေဘုယျအားဖြင့် သဘောတူညီကြသည်။ ၎င်းသည် University of Illinois at Urbana-Champaign (NCSA-UIUC)ရှိ National Center for Supercomputing Applications မှ Marc Andreessen ဦးဆောင်သော အဖွဲ့တစ်ခုက ဖန်တီးခဲ့သော graphic ဆိုင်ရာ browser ဖြစ်သည်။ Mosaic ကို High Performance Computing and Communication Act of 1991 က အစပြုခဲ့သော ရံပုံငွေအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး U.S. Senator Al Gore ရှေ့ဆောင်ခဲ့သော တွက်ချက်ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အများအပြားထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် U.S. High-Performance Computing and Communications Initiative က ရံပုံငွေ ထောက်ပံ့ပေးသည်။ Mosaic ကို မထုတ်လွှတ်မီက ပုံမှန်အားဖြင့် web စာမျက်နှာများတွင် graphic များသည် စာသားများနှင့် အတူတကွမရှိဘဲ အင်တာနက်ပေါ်တွင် သုံးစွဲလျှက်ရှိသော Gopher နှင့် Wide Area Information Servers (WAIS)တို့ကဲ့သို့သော protocol ဟောင်းများထက် လူကြိုက်နည်းလျက်ရှိသည်။ Mosaic ၏ graphic ဆိုင်ရာ အသုံးပြုသူများအတွက် မျက်နှာပြင်သည် လူကြိုက်အများဆုံး အင်တာနက် protocol သေချာပေါက် ဖြစ်လာစေသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း- မင်းတုန်းမင်းကြီးနှင့်သတင်းမီဒီယာ ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်၊ မိုဘိုင်းလ်နှင့် သတင်းအချက် အလက်ခေတ်သစ်ကိုထူထောင်လိုက်ကြသည့်အခါ မီဒီယာလောက တွင်လည်း ရိုက်ခတ်မှုများ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ အတော်လေး ပြင်းထန်မှုရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ကွန်ပျူတာကုမ္ဋဏီကြီးများနှင့် လုပ်ငန်းစုကြီးများ၊ နည်းပညာကုမ္ဋဏီကြီးများ၊ ဆက်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာ ကွန်ရက်အဖွဲ့အစည်းကြီးများ၊ သတင်းအချက်အလက် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ ပုံစံသစ်ဖြင့် ထူထောင်ဖွဲ့ စည်းလာကြသည်။ မီဒီယာလောကတွင်ပင် အွန်လိုင်းယဉ်ကျေးမှု နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်၊ ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အခြားဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများ အသွင်သစ်၊ အမြင်သစ်ဖြင့် အွန်လိုင်းခေတ်ထဲရောက်ကုန်ကြသည်။ မီဒီယာ ဆုံမှတ်သည် (Computing, Communications, Content) ဆိုသည့် "C" သုံးလုံးဖြင့်ဖော်ဆောင်ရသည့်ခေတ်ဖြစ်လာသည်။
ယူးနစ်စ် ၁၉၆၀ နှစ်များတွင် မက်ဆာချူးဆက် စက်မှုတက္ကသိုလ် ၊ AT&T Bell Labs နှင့် General Electric ကုမ္ပဏီတွေ ပူးပေါင်းပြီး GE-645 mainframe computer ပေါ်မှာ သုံးဖို့ Multics (Multiplexed Information and Computing Service) ဟုခေါ်သော ကွန်ပျူတာ စက်လည်ပတ်ရေးစနစ် တစ်ခုကို စတင်ပြီး သုတေသန လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီ operating system ဟာ လုံခြုံရေးနဲ့ အခြား စွမ်းဆောင်ရည် အသစ်တွေ ပါဝင်အောင် ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာ (Computer science) သို့မဟုတ် ကွန်ပျူးတင်းပညာ (computing science) ဟူသည် သတင်းအချက်အလက် (information) နှင့် အတွက်အချက် (computation) များဆိုင်ရာ အခြေခံ သီအိုရီ သဘောတရား များကို လေ့လာခြင်း နှင့် ယင်းအခြေခံအုတ်မြစ်များပေါ်တွင် အခြေပြု၍ ကွန်ပျူတာစနစ်များ (computer system) ကို အသုံးပြုကာ လက်တွေ့ အသုံးချမှုများကို စူးစမ်းလေ့လာသော ပညာရပ်ဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင် များသည် သတင်းအချက်အလက်များကို ဖန်တီးနိုင်၊ ဖော်ပြနိုင်၊ ပြောင်းလဲစေနိုင်စွမ်းရှိသော အဆင့်ဆင့်တွက်နည်း (algorithm) များကို တီထွင်ခဲ့ကြသည်။
ကွန်ပျူတာ Computing Tabulating Recording Corporation ( ယခုအခါ IBM ဖြစ်လာသည် ) က ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉ ရာစု အကုန်အရောက် တွင် တွေဟာ အသုံးဝင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ သည် လူတို့ အတွက်လိုအပ်နေပြီဆိုတာက သက်သေပြလိုက်ပြီးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Punched Card, Boolean Algebra , The Vacuum Tube (Thermionic Value) နဲ့ Teleprinter တွေဟာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။၂၀ ရာစု အတောအတွင်းတွင် သိပ္ပံပညာသည် များစွာတိုးတက်မှုရှိလာခဲ့ပြီး Analog Computer များလည်း တိုးတက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း၎င်း များသည် Programmable မဖြစ်သည့်အပြင် အခုခေတ် Digital များ၏ တိကျသော စွမ်းဆောင်ရည် များလည်းပါဝင်ခြင်းမရှိသေးပေ။